"पोखरा बजार टुरिस्ट हजार" त जम्मैले सुनेकै होलान्। हामी त्यहिँ हुर्केम् बढेम्, नानाथरि उपद्रो र उट्पट्याङ गरेम्, व्यक्तित्व त त्यस्तै हो तर ‘साइज’ले चैं ठुला भएम्, अब बिस्तारै बुढाहरुमा पनि गनिन्छौँ होला। 'होला' के भन्नु, लक्षण आजकलै देखा परिसकेकोछ, कसैले साइड हान्दैनन्, आफुले हानेका साइडको रेस्पोन्स पाइन्नन्। कताकता मन खिन्न हुन्छ। जे होस् टुरिस्ट बढेका बढ्यै छन् पोखरामा। ‘ट्रेकिङ’, ‘साइट सिईङ’, ‘बोटिङ’ले त प्रख्यात नै थियो पोखरा, ‘एभिया क्लब’का स्याना जहाज अनि ठुल्ठुला रंगीचंगी बेलुनमा मान्छेहरु उड्न आऊँथे, अहिले झन् ‘प्याराग्लाईडिङ’ र ‘जिप फ्लायर’ले गर्दा आन्तरिक र बिदेशी पर्यटक ह्वात्तै बढेका छन्। अझै केबुल कार र अरु धेरैकुरा खुल्दैछन् भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ।
हामी स्याना हूँदा यतिका धेरै पर्यटक हूँदैनथे, जे होस् फाट्टफुट्ट चाहिँ देखिन्थे। टुरिस्टलाइ हामी कुइरे भन्थेम्, बसमा देखिए भने 'टाटा', साक्षात देखिए भने 'नमस्ते' गर्नु भनेर हामीलाई सिकाइएको थियो। अझ दुईतले बसमा कुइरे आएको देखेम् भने टाटा गर्दै च्याँठ्ठिदै उफ्रिन्थेम्। अचेल त्यो दुइतले बस कता गयो होला कुन्नि? धेरै भो नदेखेको। कहिलेकाहिँ कुइरेहरु ट्रेकिंग जानको लागि लाइन लाएर हिंड्दै आऊँथे, सबैभन्दा अगाडी ठुल्ठुला डोका बोकेका भरिया, तीनको पछिपछि एउटा गाइड र टुरिस्टहरु हुन्थे। हामी छुचा केटाकेटी, कुइरे देख्ने बित्तिकै 'नमस्ते, हेल्लो, टु रुपिज' भनी हाल्थेम्। तर कसैले 'टु रुपिज' झारेको चाहिँ मलाइ याद छैन। नदिए पछि हामी तीनलाई 'भुक्का टुरिस्ट' भन्थेम्। ती नेपाली गाइडहरुले हामी फुच्चेहरुलाइ टुरिस्टको आसपास देखि सहन्नथे।
नुवाइधुवाई गरेर शनिबारको फिलिम हेरेर होमवर्क गर्न आँटेको थिएँ, अर्को पोकोमा पनि त्यस्तै चकलेट छन् कि भन्ने कौतुहलता जाग्न थाल्यो। पोको लिएर माथि सिरानको तलामा पुगें, बिस्तारै पोको खोलें। अफसोच, यसमा चाहिँ चकलेट रहेनछ। मसिना धागा भएको स्यान स्याना पुरिया थिए। नियालेर हेरें, पुरिया भित्र त खैरो धुलो। मेरा हंशले ठाम छोडे, हातखुट्टा लगलग कामे। फ्ल्यास्ब्याकमा पुगेँ, 'यी कुइरेहरु नेपालाँ स्म्याक र ब्राउन सुगर खान आउनी हुन्' कसैले भनेको याद आयो। 'ए आमा....... ड्रग्स!' म त्यस्ता कुरा अलिअलि बुझ्ने भैसकेको थिएँ। क्लासका सुड्डा दाइहरु तोप/ब्ल्याक बनाएर खाएको देखेको थिएँ। पोको खोपीमा लुकाएर तल ओर्लें, फटाफट होमवर्क गरेर सुतें। मसँग ब्राउन सुगर भएको कुरा थाह पाएर पुलिस आउने हुन् कि भनेर रातभर डर लाग्यो। भोलिपल्ट स्कुल गएँ, एउटा तोपे दाइलाइ खुसुक्क बोलाएर भने, 'मसँग ब्राउन सुगर छ, खाने भए ल्याइदिन्चु', छक्क पर्दै उसले सोध्यो, 'काँ'ट ल्याको?', मैले टुरिस्टको चोरेको भनेर भनें। लोइरे डरायो, 'हुन्न यार तिनीहरुले हान्ने माल त डेन्जर हुन्छ, म त खान्न।'
त्यसपछि अलि दिन ब्राउन सुगरको खासै याद आएन। अर्को शनिबार फेरी डुल्दै त्यहिँ पुगें। जिपका पांग्राका डाम मेटिईसकेका रहेछन्। झल्याँस्स सिरानको तलामा राखेको ब्राउन सुगरको याद आयो। घर फर्कें, तलामा गएँ, अनि एउटा ब्राउन सुगरको पोको खल्तीमा हालें, लुसुक्क भान्सामा पुगें, सलाईको बट्टा टिपें अनि हजुरआमाको कोठामा गएर चुरोट चोरें। कसैले थाह नपाउने गरी खेतको बीचमा भएको बेलौतीको रुखमा चढें। बेलौती लटरम्म फलेका थिए, त्यो सिजनमा हाम्रो खाजा नै बेलौती हुन्थ्यो। गोजीबाट सारा सामाग्री निकालेर म 'मेक हान्ने' तयारीमा जुटें। ‘एक्स्पेरिएन्स’ नभए पनि केटाहरुले 'मेक' हानेको देखेको थिएँ। ‘प्रोसेस’ याद थियो। पहिले चुरोटको सुर्ती देब्रे हातमा झारें। तर कसो कसो मिलेन, धेरै जसो सुर्ती बाहिर खस्यो। अनि ब्राउन सुगरको पोको खोलेर देब्रे हातमा भएको सुर्तीसँग मोलें। केटाहरुले जसरी भर्न आएन, अनि औंला र सलाईको काँटीको सहायताले बल्लतल खाली चुरोटमा 'माल' भरें। अब 'फायर' हान्न बाँकी थियो। केटाहरुले गाँजा खाएपछि एकदम भोक लाग्छ भनेको सुनेको थिएँ, यो त झन् ब्राउन सुगर, फेरी भोकले नै मरिने पो हो कि भनेर दुइटा बेलौती खाएँ, अनि 'माल' 'फायर' हानें।
मैले जिन्दगिमा त्यति नराम्ररी सर्को परेको कहिल्यै थाह पाएको थिईन। त्यो दिन यति नमिठो धुवाँ पेटभित्र गयो कि, कुरै नगरौं। 'फायर' हानेर तान्दा पटटटट आवाज पनि आएको याद छ। बररर आँशु झरे, खोक्दै आँशु पुछ्दै घर फर्कें। ब्राउन सुगर यस्तो पो हुनेरहेछ, बल्ल थाह पाएँ। क्यारेर खाँदा हुन् कुइरेहरुले? घरीघरी नमिठो हस्को आऊँथ्यो अनि मुख बिगार्थें। छ्या अब खान्न यस्तो चीज, फालिदिन्छु भनेर सिरानको तलामा पुगें। पोको निकालें। बल्ल पोकोको खोल हेर्ने बुद्धि आयो। पढें। त्यहाँ ठुल्ठुला अक्षरमा लेखेको थियो - Yorkshire Tea Bags.
binokary November 27, 2012 at 8:24 PM
रमाईलो, अन्त्यसम्ममा पनि के होला जस्तो लाग्ने। तर त्यो ब्राउन सुगर होईन भन्ने त थाहा भाको हो, खैरो भनेपछि। :)
friendycalls November 27, 2012 at 10:42 PM
Hahahahahahahahahahhahahahahah Moren ma hasera :D :D :D
@lohsirk November 28, 2012 at 5:28 AM
Aafnai parivesh ko katha... Sarai ramailo lagyo... Hami pani kuire bhane pachhi hurukkai huntheu... Kuirele line chij ta sabai ramra ramra... Mahanga matra hunchhan jasto lagthyo... Kuire le mineral water ko bottle bato ko chheu chhau ma faleko dekhiyo bhane.. Tipera ghar laginthyo.. Dui char din.. Aankhara ko sato tesai bata pani khaienthyo... Kuire style ma :D
tin tin November 28, 2012 at 8:59 AM
И®ℬ November 28, 2012 at 11:49 AM
И®ℬ Likes your comment.
И®ℬ November 28, 2012 at 11:50 AM
NEPgrunz November 28, 2012 at 11:56 AM
hehe... Yorkshire Tea Bags aray! laast khatra ending chi! sakiyepachhi climax aayechha...
Chebok January 30, 2013 at 3:50 AM
milestone herda katha arkai kalpana garethe.....padhda arkai...ramilo lageo.. ..ajha tope dai haru ko techinical word haru
И®ℬ February 11, 2013 at 5:24 PM